Global Voices teny Malagasy · 2 Novambra 2007
02 Novambra 2007
Tantara tamin'ny 02 Novambra 2007
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Novambra 2007
Ny 30 novambra 2007 no andraisana ny tolotra farany. Manaiky ny handray ireo tolotra tetikasa (avy amin’olo-tsotra) mety hahazo vatsy hatramin’ny $5.000 indray ny Rising Voices, rantsa-mangaikan’ny Global Voices aty amin’ny firenena ankoatra ny tany mandroso. Izay te-handray anjara amin’izany dia handahatra amin’ny antsipirihany sy amin’ny endrika vaovao ny fomba...
Amerika Latina02 Novambra 2007
Vita ny fifidianana tao Arzantina. Misy milaza fa io angamba ny fifidianana tsy nahasarika indrindra hatramin’ny niverenan’ny demokrasia tamin’ny taona 1983. Roa andro mialoha ny fifidianana anefa dia tsy misy marika amantarana izany teny an-dalana ankoatra ny afisy vitsivitsy. Tsy nandray anjara tamin’ny raharaha ny ankamaroan’ny olom-pirenena, nefa tsy midika...
Armenia : Mariazin’ny Mafia
Azia Afovoany sy Kaokazy02 Novambra 2007
Asehon’ny Hetsi-panafahana sosialista Armeniana Armenian Libertarian-Socialist Movement amin’ny alalan’ny rakitsarimihetsika ho an’ny mpamaky sy mpijery azy ny fomba fiainana sy fihetsiketsehana tsy fahita loatra nataon’ny mpanankarena indrindra andaniny sy ny manana ny fahefana ambony indrindra ankilany tany amin’io firenena io. Oronantsarimihetsika nalaina avy tamin’ny mariazin’ny anabavin’i Gagik Tsarukian io ary...